ब्लाइण्डफोल्ड रिडिङको सत्यता – Rajdhani Daily
ब्लाइण्डफोल्ड रिडिङको सत्यता
एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अविरल नामक बालक देख्न पाइयो । रुमालले आ“खा छोपेर पनि उनले देख्न सकेको पढ्न सकेको देख्दा धेरैलाई अचम्म लाग्यो । धेरैले उनलाई विलक्षण, अद्भूत तथा अलौकिक प्रतिभाको संज्ञा दिए । भारतमा त यस्ता बालबालिकाहरू चोकचोकमा गल्लिगल्लिमा छयापछाप्ती देख्न पाइन्छ । केही वर्ष पहिला प्रसिद्ध संगीतकार अन्नू मल्लिक तथा फिल्म निर्देशक फरहाखान जज भएको एक टेलिभिजन कार्यक्रममा एक बालिकाले यसरी नै आ“खा बन्द गरेर देख्न सकेको पढ्न सकेको धेरैले हेरेको हुनुपर्छ । उक्त बालिकालाई दर्शकदीर्घाले मात्र होइन, अन्नू मल्लिक तथा फरहाखानले समेत खुब प्रशंसा गरेका थिए ।
अब प्रश्न उठ्छ । के मानिसले आ“खा नै बन्द गरेर देख्न सक्छन् ? के कुनै ट्रेनिङबाट यस किसिमको क्षमता विकास हुन सक्छ ? मिडब्रेन एक्टिभेसन वर्कशप चलाउनेहरूको दाबी छ, सक्छ । उनीहरूको भनाइ छ, ब्लाइण्डफोल्ड ट्रेनिङबाट मिडब्रेन एक्टिभेट हुन्छ र मिडब्रेन एक्टिभेट भएपछि बालबालिकाहरूको मस्तिस्क शक्ति, ज्ञानेन्द्रिय शक्ति तथा बौद्धिक क्षमता चमत्कारीकरूपमा बढ्छ । यस्ता बालबालिकाहरूले आ“खा बन्द गरेर नै देख्न तथा पढ्न सक्छन् । सँुघेर तथा सुनेरसमेत वस्तु पहिचान गर्न सक्छन् ।
के हो मिडब्रेन ट्रेनिङ
पाँच वर्षअघि भारतलगायतका देशमा भित्रिएको मिडब्रेन एक्टिभेसन नामक ट्रेनिङको अहिले बाढी आएको छ । मोटो रकम असुलेर यस्ता ट्रेनिङ गराउन संस्थाहरू भारतका गल्लीगल्लीमा छयापछयाप्ती छन् । नेपालका केही ठाउ“मा पनि यस्ता संस्थाहरू खुलेको सुन्न आएको छ । जापानमा विकास भएको भनिएको यस ट्रेनिङ मिडब्रेन एक्टिभेसन ट्रेनिङ, ब्लाइण्डफोल्ड ट्रेनिङ तथा सेन्सइनहान्सर ट्रेनिङ आदि जस्ता नामहरूमा गराउने गरेको पाइएको छ ।
बायाँ मस्तिष्क र दाया“ मस्तिष्कलाई जोड्ने एक हिस्सा हुन्छ, जसलाई इण्टर ब्रेन वा मिड ब्रेन भनिन्छ । अधिकांश मानिसले बाया“ मस्तिष्क उपयोग गर्छन्, जब कि दाया“ मस्तिष्क कम उपयोग हुन्छ । यदि बीचको मिडब्रेन एक्टिभ भयो भने मानिसमा अद्भूत प्रतिभा विकास हुने कतिपयको भनाइ छ । यही सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर नै मिडब्रेन एक्टिभेसन टेक्निक विकास गरिएको देखिन्छ ।
मिडब्रेन एक्टिभेसन ध्यान र विज्ञानको संयोगबाट विकास गरिएको टेक्निक भएको भनाइ यसका पक्षधरहरूको छ । साधारणतथा यो कोर्स दुई दिनको हुन्छ । ६–६ घण्टाको दुई दिने वर्कसपपछि हप्ताको एकपटक फलोअप हुन्छ । त्यसपछि दैनिक १०, १५ मिनेट यो अभ्यास घरमै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कोर्स ५ देखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिका मात्र गराइन्छ । १५ वर्षपछि मिडबे्रन एक्टिभेसन हुने संभावना न्यून भएकाले यो कोर्स १५ वर्ष मुिनका बालबालिकालाई गराइने भनाइ यस ट्रेनिङका प्रशिक्षकहरूको छ ।
यस वर्कसप गरेर केही महिना अभ्यास गर्ने हो भने बालबालिकाको मस्तिष्क शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञानेन्द्रिय शक्ति, एकाग्रता, विश्लेषणात्मक शक्ति, ईक्य, आईक्य, सिर्जनशीलता, कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास बढ्ने तथा आ“खाबन्द गरेर नै देख्न सक्ने, पढ्न सक्ने क्षमता विकास हुने दाबी वर्कसप सञ्चालकहरूको छ । यस ट्रेनिङ गरेका बालबालिकाहरूले आ“खा छोपेर नै किताब पढेको, साइकल तथा मोटरसाइकल चलाएको देखेपछि आफ्ना छोराछोरीमा पनि यस्तै क्षमता विकास होस् भन्ने लालसाले यसप्रति अभिभावकहरूको आकर्षण बढ्दो छ । तर यस ट्रेनिङ चिटिङ भएकाले यसप्रति सचेत हुनुपर्ने कतिपय विशेषज्ञहरूको सुझाव छ ।
उनीहरूको आईक्यु, ईक्य, सोच समझ तथा शैक्षिक स्तरमा पनि कुनै तात्विक फरक भेटि“दैन । तब यस ट्रेनिङको औचित्य के ? आ“खाबन्द गरेर पनि पढ्न सक्छु भन्ने कुरा देखाउनका लागि मात्र ? त्यसैले यो झुठको खेतीबाहेक अरू केही होइन । अर्को कुरा यो ट्रेनिङ आ“खा नदेख्ने बालबालिकाहरूलाई गराएको पनि पाइ“दैन । यदि यो ट्रेनिङ सत्य हुन्थ्यो भने अन्धा व्यक्तिहरूले यस ट्रेनिङ गरेर सामान्य व्यक्ति झैं लेखपढ गर्न सक्ने थिए, हि“ड्डुल गर्न सक्थे
मिडब्रेन एक्टिभेसन ट्रेनिङ विज्ञान सम्मत छैन । ब्लाइण्डफोल्ड रिडिङलाई स्नायु वैज्ञानिकहरूले ठाडै अस्विकार गर्छन् । उनीहरूको भनाइ छ, यस किसिमको ट्रेनिङबाट न मिडब्रेन एक्टिभेट हुन्छ, न त मानिसले आ“खाबन्द गरेर देख्न सक्छ । भारतका चर्चित रेसनालिष्ट डा. नरेन्द्र नायकले सार्वजनिक रूपमा नै यस ट्रेनिङलाई झुटो सावित गरि दिएका छन् । उनको भनाइ छ, यस ट्रेनिङमा बे्रेनको ट्रेनिङ होइन, कि बालबालिकालाई ब्लाइण्डफोल्डको तल्लोचरबाट हेर्ने ट्रिक सिकाइन्छ । यस्तो क्षमता भएको भनिएका बालबालिकाहरूको आ“खा बन्द गराई टेप लगाइदिने हो भने यस ट्रेनिङको हावा निस्किने उनको भनाइ छ । डा. नायकले उनको सामु यदि कसैले यस्तो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छन् भने १० लाख पुरस्कार दिने घोषणासमेत गरेका छन् ।
यहा“ उल्लेखनीय कुरा के भने मिडब्रेन एक्टिभेसन ट्रेनिङका समर्थकहरूले जे जस्तो दाबी गरे पनि यस्तो ट्रेनिङ लिएका बालबालिकाहरूमा यो ट्रिक क्षमताबाहेक अन्य कुनै मानिसका क्षमताहरू विकास भएको देखि“दैन । उनीहरूको आईक्यु, ईक्य, सोच समझ तथा शैक्षिक स्तरमा पनि कुनै तात्विक फरक भेटि“दैन । तब यस ट्रेनिङको औचित्य के ? आ“खाबन्द गरेर पनि पढ्न सक्छु भन्ने कुरा देखाउनका लागि मात्र ? त्यसैले यो झुठको खेतीबाहेक अरू केही होइन । अर्को कुरा यो ट्रेनिङ आ“खा नदेख्ने बालबालिकाहरूलाई गराएको पनि पाइ“दैन । यदि यो ट्रेनिङ सत्य हुन्थ्यो भने अन्धा व्यक्तिहरूले यस ट्रेनिङ गरेर सामान्य व्यक्ति झैं लेखपढ गर्न सक्ने थिए, हि“ड्डुल गर्न सक्थे ।
हो, मानिसको ब्रेन निकै रहस्यमय छ, ब≈माण्ड जस्तै । यसको धेरै रहस्य पत्ता लगाउन बा“की नै छ । तर विज्ञानले पनि मानेको कुरा के भने जसरी शारीरिक व्यायामबाट शारीरिक शक्ति बढ्छ, मांशपेशी मजबुत हुन्छ, त्यसरी नै उचित ढंगले ब्रेनको व्यायाम गर्ने हो भने मस्तिष्क शक्ति बढ्न सक्छ । स्मरण शक्ति बढ्न सक्छ । तर मिडबे्रन एक्टिभेसन कोर्स गरेका बालकालिकाहरूमा एक रत्ति पनि मस्तिष्क शक्ति तथा स्मरण शक्ति बढेको पाइ“दैन । तसर्थ ब्लाइण्डफोल्डको तल्तिरबाट हेर्ने ट्रिक सिकेर नै बालिबालिकाहरूले यस्तो तथाकथित क्षमता प्रदर्शन गरेका हुन् भन्ने डा. नायकको भनाइमा दम छ ।
अतः मिडबे्रन एक्टिभेसन वर्कसप पूर्णतया चिटिङ भएको प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले आ“खाबन्द गरेर पनि कसैले कसरी देख्न सक्छ भन्ने कमनसेन्स समेत राख्न नसकेर यस्ता बालबालिकालाई मिडियामा प्रस्तुत गरेर यस्ता झुठो ट्रेनिङलाई प्रोत्सान गर्नु पनि ठीक होइन ।
(बानियाँ मनोविद् हुन् )